Shina: Hetsi-panoherana vahiny maromaro, notohanan’ny fitaovana 2.0 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Janoary 2019 3:29 GMT
Iray amin'ny (angamba) lahatsoratra farany momba ny hetsi-panoherana alohan'ny hiverenantsika indray amin'ny lohahevitra eto; ny voalohany dia ny solon'anaran'ny mpiady anaty akata Eksodosy 8: 1 ilay iraka nataon'ny mpikatroka Kristiana Eddie ‘iamgadfly’ Romero ho an'ny zon'olombelona tao Shina izay nahitana azy nandoko ny rindrina tamin'ny sary hosodoko farafahakeliny tamin'ireo efitra 2 tao amin'ny hotely mihaja ao Beijing ary avy eo dia lasa niafina izy. Mbola nandefa sioka izy, na izany aza, ary nandefa lahatsary tao amin'ny YouTube .
Ary androany (09/08/2008), nalefan'ilay bilaogera mpitati-baovao be herimpo @noneck mivantana tao amin'ny Qik.com ny hetsi-panoherana iray nataon'ireo vondrona mpikatroka Amerikana Afaho Tibet ; nalefa ny lahatsary fanampiny rehefa navoaka izany:
Tao anatin'ny ora iray latsaka dia efa niseho ny sioka farany avy amin'i @noneck (na i Noel Hidalgo) ; ity ny horonantsary izay notononiny [rohy efa maty] :
Nanao toy izany ihany koa tamin'ny taon-dasa (2007) i Lhadon Tethong avy ao amin'ny Mpianatra ho an'ny Afaho Tibet rehefa niditra ‘an-tsokosoko’ ihany koa izy ary niafina tamin'ny manampahefana Shinoa raha mbola nitantara mivantana tamin'ny alàlan'ny bilaogin-dahatsary ny fangatahany mba hisarihana ny sain'ny filohan'ny Komitin'ny Lalao Olaimpika Jacques Rogge.